Ungayigcina njani i-Gif kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 10, 2021 0 IiCententarios 287
Kwi-Instagram, njengazo zonke iinethiwekhi zentlalo zalo mzuzu, uya kufumana umxholo omkhulu. Ukusuka kumxholo wokupapasha isicatshulwa, ukuya kwiividiyo kunye nokunxibelelana namaphepha ewebhu. Oku kuye kwenza la maqonga eendaba ezentlalo ukuba onwabe.
Nangona i-Twitter ikhethekileyo kwimixholo yeendaba, unokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezinye iiTweets. Kuya kufuneka ubeke igama elingumxholo kumxholo owufunayo kwibar yokukhangela yeqonga ukuze uyifumane.
Phakathi kwemixholo abasebenzisi abayonwabela kakhulu, zezi iividiyo kunye nee-GIFS.
Olu luhlobo lwefomathi eyenziwe ngokulandelelana okungaphazanyiswa kwemifanekiso edlalwa emva ngokungenammiselo kwimowudi yeluphu. Batyekele ekubeni kuzo zonke iintlobo zezifundo, ngakumbi iikhathuni kunye nemiboniso bhanyabhanya.
Ukugcina umfanekiso kwi-Twitter, ngakumbi i-Twitter, yinkqubo elula kakhulu. Landela la manyathelo ndiwabonisa apha ngezantsi. Le nkqubo iyafana kuzo zombini iinkqubo zokusebenza ezinje nge-Android kunye ne-IOS, kunye nezo zePC.
Ukukhupha i-URL kwi-GIF
Ngena kwisixhobo sakho okanye kwi-PC kwiakhawunti yakho de kuTwitter.
Skrolela kumaxesha akho okufumana i-Tweet apho i-Gif ofuna ukuyikhuphela khona. Unokukhangela i-tweet kwi-bar yokukhangela ye-Twitter.
Nje ukuba uyifumane iTwitter, cofa kuyo. Oku kuyakwandisa ukuze ukwazi ukufunda umxholo wokubhaliweyo, ukuba unayo. Emva koko, cofa ekunene kwi-GIF, isithuba esinokukhetha "ikopi yedilesi yeGIF" iya kubonakala.
Khuphela i-GIF usebenzisa izixhobo zewebhu
Emva kokufumana idilesi yewebhu, kufuneka ungene kwisikhangeli sewebhu oqhele ukusisebenzisa. Ngena njengemilinganiselo yokukhangela: "khuphela i-gif kwi-Twitter." Iziphumo zokuqala ozifumanayo ziya kuba zezona zinemfuno ephezulu kwiwebhu.
Xa ungena kweli qonga, uya kubona ibar emhlophe apho kuya kufuneka uncamathisele i-URL oyikhuphe kwi-Tweet. Nje ukuba uyincamathisele, Kuya kufuneka ucofe elinye lamaqhosha amabini oza kulifumana ngezantsi kwebar.
Le webhsayithi yenzelwe ukukhuphela iividiyo, kodwa ungasebenzisa inkqubo efanayo yokukhuphela ii-gifs. Kumaqhosha asezantsi unokukhetha phakathi kwezigqibo ezahlukeneyo zevidiyo, ukuba kufanelekile. Kwii-GIFs, oku akuyomfuneko. Ke kufuneka ucofe nje ku "Khuphela i-MP4".
Unokubona ngezantsi kwala maqhosha intengiso enegama le-GIF kunye ne icon oza kwabelana ngayo. Xa ucinezela le icon, iwindow iya kuvela nee icon zonxibelelwano apho ungabelana nge-GIF. Ikhonkco ngqo kunye nedilesi ye-HTML nayo iya kuvela ukuze ukope ngokuthe ngqo.
Nje ukuba iqhosha lokukhuphela licinezelwe, i-GIF iya kuqala ukukhuphela ngokuzenzekelayo. I-GIF iya kufumaneka ngokuzenzekelayo kwifolda yokukhuphela yePC yakho okanye kwigalari yesixhobo sakho esiphathwayo, njengoko kunokuba njalo.
1 Zithini iiGif?
2 Ukukhupha i-URL kwi-GIF
3 Khuphela i-GIF usebenzisa izixhobo zewebhu